Macalinka xulka Belgium ee Roberto Martínez oo xaqiijiyay in Lukaku uu ku dhow yahay ka tagista kooxda Man United – Gool FM
(England) 18 Juunyo 2019. Macalinka xulka qaranka Belgium ee Roberto Martínez ayaa aaminsan inay iska cadahay in Romelu Lukaku uu ka tagayo kooxda Manchester United inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
26 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Manchester United xagaagan islamarkaana uu u dhaqaaqayo Inter Milan, iyadoo si toos ah u codsaday tababaraha cusub ee Nerazzurri Antonio Conte adeega ciyaaryahankan.
Waxay u muuqataa in xiddiga reer Belgium ee Romelu Lukaku uu ka tagi doono Manchester United, kaddib markii uu kaga soo biiray xagaagii 2017 kooxda Everton balse ma uusan la qabsanin jawiga halkaas.
Hadaba shabakada caanka ee “Sky Sports” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu Roberto Martínez kaga hadlay mustaqbalka Lukaku ee kooxda Manchester United wuxuuna yiri:
“Sida iska cad, Romelu Lukaku waa inuu ka tagaa kooxda Manchester United”.
“Waxay noqon doontaa arin u fiican labada dhinacba, Lukaku iyo kooxda Manchester United, Romelu waa inuu hada helaa kooxda saxda ahayd uu ku biiri lahaa”.
Waxaa xusid mudan in heshiiska uu Romelu Lukaku ku joogo kooxda Manchester United uu gaarayo ilaa iyo 2022, wuxuuna ka soo muuqday Red Devils xilli ciyaareedka dhawaan soo idlaaday ee 2018/2019 45 kulan, isagoo dhaliyay 15 gool, halka 4 kalena uu caawiyay.